Uquqa kwinkundla zamatyala umasipala waseNgqushwa – Ntu News
Uquqa kwinkundla zamatyala umasipala waseNgqushwa
September 8, 2021 September 8, 2021 Jasmin Rose	0 Comments
Inqaku libhalwe nguSesona Mqheliswa
uMasipala waseNgqushwa ujamelene nezithyolo zorhwaphilizo nobuqhophololo ngakwiziniki maxabiso zeethenda.
Oku kuza emva kokuba unothimba ethathe iimoto, ne-computers kunye nezinye izixhobo zalo masipala ngenjikalanga yayizolo ngenxa yengxakii zorhwaphilizo nobuqhophololo.
Ezi zityholo ziquka ukungahlawuli iindleko zomthetho kwisigwebo senkundla ephakamileyo nalapho inkampani ezibiza nge Eastern Cape Black Contractors Forum (ECBCF) iphumelele ngokuchasene neenkqubo zeethenda.
Ngokwengxelo ka Mnumzana uKhwezi nongusihlalo we ECBCF uthi ababantu bazifumana kabini ezithenda kwaye inkundla kamantyi yayalela umasipala ukuba zibuyiselwe emva kuqalelwe phantsi inkqubo yokupha ezithenda ukuze zifunyanwe ngabantu abaselungelweni, kodwa noxa kunjalo uMasipala uyasiphikisa esisigqibo senkundla .
“Thina siyi ECBCF sasifuna ukuba loMasipala asibonise iinkqubo iinkampani ezanikezwa ezo thenda ukuba zanikezwa njani Kuba zazingafanelanga kuzifumana, kwaye phakathi kwazo kukho abanxibelelene nabantu abanikezela ngeethenda ukanti loMasipala wawudelela umyalelo wenkundla wokuguqula loo manqanaba ethenda”, utshilo uMnu Khwezi.
Abahlali baseHamburg nabase Emthonjeni Lodge kunye neZiko leNkomfa kulo masipala oko bejamelene nengxaki yokunqongophala kwamanzi.
Ingxelo zithi umphathi waloMasipala waseNqushwa, uNdoda Mgengo, ukhe wazama ukugxotha umnini-thenda, uNolubabalo Babsi Mcinga, wase-Emthonjeni Lodge kunye nabo bahlala kuyo ngolwesiHlanu umhla wesi-3 kweyoMsintsi waphinda wazama ngomhla wesine kwinyanga yoMsintsi ngaphandle komyalelo wenkundla. UMcinga ukusukela ngoko uye wawunikezela lo mba kumagqwetha akhe.
Elityala lalichotshelwe kwinkundla ephakamileyo yeli lo Mzantsi Afrika eTinarha kweyoKwindla 2021, isigwebo senkundla ephakamileyo sasisithi uMasipala kufuneka abuyisele emva amanqanaba ethenda kwaye aqale ngokubhengeza ezo ziniki maxabiso.
Umphathi walomasipala akafumanekanga ukuze avakalise elabo icala bengumasipala.
← SA National Parks Week postponed
Electoral Commission complies with Con Court ruling →
Lifestyle Flooring & Décor (LFD) a home grown Product
SA logs over 19 500 new COVID-19 cases